Aleo hisy maso an-katoka ihany! | NewsMada
Aleo hisy maso an-katoka ihany!
Izay izany no izy mahakasika iny fihodinana voalohany tamin’ny fifidianana filoham-pirenena iny. Angamba, tsy nisy loatra ny tsy nampoizina satria tsy nifanalavitra firy ny vokatra avy amin’ny Ceni sy ny tena ofisialy, avy amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana.
Azo lazaina ho fiatoana kely ny fotoana niandrasana iny valim-pifidianana iny. Naka aina kely ny mpilalao: ireo kandidà, indrindra ireo hiatrika fihodinana faharoa. Niala sasatra koa ny vahoaka, nilamindamina teo am-pitadiavana izay harapaka. Tsy haharitra ela anefa izany satria tsy maintsy hatrehina ny fihodinana faharoa, hanapahana ilay heverina ho mendrika sy hahay hitantana ity firenena ity.
Hanomboka tsy ho ela ny hazakazaka: fitetezam-paritra etsy sy eroa, famolavolana fanambarana sy kabary mambabo fo, fahaiza-mitandrin-tena amin’izay rehetra atao sy hambara ary haleha, sns. Ho an’ny kandidà roa tonta ireo asa goavana ireo. Ho an’ny vahoaka koa, ho raikitra ihany koa ny adisanina sy ny adin-tsaina.
Tsy azo ialana ny asa aman-draharaha andavanandro, toa tsy ho tapitra ary tsy ampy akory aza angamba ny andro mazava natokana ho amin’izany. Tsy azo odian-tsy hita koa anefa ny raharaham-pirenena. Na tiana na tsy tiana, tokony hohenoina ihany ny andaniny sy ny ankilany. Izay no maha olom-pirenena tompon’andraikitra, mandanjalanja mba ho tsara safidy sy tsy holatsain’ny nenina ao aoriana.
Raha fintinina, roso ny dia amin’ny fanorenana na fanarenana an’i Madagasikara. Ho samy revo na ny mpifidy na ireo hofidina sy ny manodidina azy. Na izany aza, aleo hisy maso an-katoka ihany! Ny ratsy kely lalana, sao hisy ny hanao tantely afa-drakotra harem-pirenena na koa hisy hihevitra hoe “… ho lany ihany ny paiso an-kady”. Rehefa samy variana mantsy, toa misy hatrany ireo mahay manararaotra.